China nke eweputara na Drop Cross-flow Towers maka Generation Power, HVAC buru ibu na ndị na-arụpụta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta ọrụ | Yubing
Ha dabara adaba nke ọma maka ngwa ọrụ mmepụta ihe dị arọ na osisi ike, fatịlaịza, osisi petrochemical na mmanụ mmanụ na imepụta mmanụ ụlọ na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke ụlọ elu ọhụrụ bụ fiberglass ọkụ na-ere ọkụ n'ihi oke ike ya na ọkụ na-egbochi resistive.
Ọ bụ ụdị dịgasị iche iche dị iche iche na-atụle arịrịọ dị iche iche nke nhazi. Towerlọ elu dị na ntanetị bụ nhazi ọkọlọtọ maka ebumnuche arụmọrụ, mana usoro ntanetị, azụ na azụ, na nhazi gburugburu bụkwa nhọrọ mgbe atụmatụ atụmatụ chọrọ ụzọ dị iche.
Nhazi gburugburu nwere ike ịbụ ezigbo ihe ngwọta maka saịtị nwere oke.
Nhazi nhazi ahịrị
Rụ ụlọ elu ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ na-enye nhazi ahụ opekata mpe ike, gụnyere belata ike oriri na isi ọkụ ọkụ. Were na akaụntụ nke oru oma abanye ikuku ohere, ụlọ elu ahụ dị elu na-eri na-ebelata.
Nhazi na Ndabere
Nhazi usoro ụlọ elu nwere ike ịdaba na njedebe saịtị ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume maka nhazi usoro. Tụnyere linear ndokwa, na-akwado ume na pumping isi ma mụbara nke ga-eduga a elu na-eri ma ala thermal arụmọrụ.
Aghota Na-akara nhazi
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịhazi ụlọ elu na otu ahịrị, ọ dị mma ịkewaa na ịhazi ụlọ elu ahụ n'ime nkeji abụọ ma ọ bụ karịa ahaziri na nhazi usoro ntanetị na-atụle isi ihe ndị a:
Ọ ga-belata nnukwu ụlọ elu na-agbapụta isi site na kewaa mpaghara ikuku dị n'etiti ụlọ elu abụọ.
O nwere ike belata ego ụlọ elu mere ka ọ dịrị nke ụlọ elu belata wee nwee arụmọrụ.
Ọ na-ebelata ume ofufe site n’inweghachi arụmọrụ furu efu site na ikuku ikuku abụọ.
Ọ na-ebelata arụnyere ogologo site tinye n'ọrụ ebe n'etiti ụlọ elu maka mgbapụta olulu, piping, na ohere ndokwa.
Ike nrụgide a pụrụ ịdabere na ya site na ịcha ikuku na-adọta mmiri na-ada na ọkara.
Nlekọta dị mfe karị na ịhazi ọrụ site n'inye ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ elu dịpụrụ adịpụ dị mfe
Nke gara aga: ICE Industrial Water Softener System maka Jụrụ Tower Source Water
Osote: Bottle Type Counter-flow Cooling Towers
ubi wuru ulo oru jụrụ ụlọ elu
ulo oru jụrụ ụlọ elu maka ike ọgbọ